संयुक्त लगानीका पाँच बैंक : ५ वर्षमा रू. ५७ करोड कमाए | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर संयुक्त लगानीका पाँच बैंक : ५ वर्षमा रू. ५७ करोड कमाए
on: March 06, 2019 मुख्य खबर, समाचार
संयुक्त लगानीका पाँच बैंक : ५ वर्षमा रू. ५७ करोड कमाए
निक्षेप औसतमा ९७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा सञ्चालन भइरहेका ५ वाणिज्य बैंकको खुद नाफा औसतमा १२९ प्रतिशत बढेको छ । संयुक्त लगानीका नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक र एनसीसी बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ दोस्रो त्रैमासदेखि आव २०७५/७६ को सोही अवधिसम्म औसत रू. ५७ करोड ६१ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । एनसीसी बैंकमा भने सन् २००२ देखि विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिइ सकेको छ ।
उक्त अवधिमा बैंकहरूले चुक्तापूँजी बढाउन र शाखा विस्तारमा जोड दिएका कारण वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्दै उक्त नाफा कमाएका हुन् । यी पाँच बैंक २०५० सालदेखि २०५३ सालको बीचमा स्थापना भएका हुन् । यी बैंकको निक्षेप गत ५ वर्षमा औसतमा ९७ प्रतिशतले बढेको छ । सम्बद्ध बैंकहरूको वित्तीय विवरणअनुसार सोही अवधिमा ती बैंकको चुक्तापूँजी पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा यी बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभेका थिए । त्यसले पनि बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुधार्न सहयोग गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार एनसीसी बैंकबाहेक बाँकी चार बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब नाघिसकेको छ ।
एनसीसी बैंकको ५ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी ३ सय ७७ प्रतिशतको दरले चुक्तापूँजी बढेको छ ।
हाल यस बैंकको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब १ करोड रहेको छ भने नाफा १ सय ९७ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर रू. ७४ करोड ११ लाख पुगेको छ । यस बैंकमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, एपेक्स डेभलपमेन्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएका छन् ।
समीक्षा अवधिमा एभरेष्ट बैंकको नाफा ८५ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । भारतको पंजाब नेशनल बैंकसँग संयुक्त लगानीमा रहेको यस बैंकले निक्षेप ७७ दशमलव ३५ प्रतिशत बढाएर रू. १ खर्ब २४ अर्ब संकलन गरेको छ । यस बैंकको चुक्तापूँजी बढेर रू. ८ अर्ब १० करोड पुगेको छ । संयुक्त लगानीकै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भने यी पाँच बैंकभन्दा निकै अघि स्थापना भएका कारण यस सूचीमा नराखिएको हो ।
एनसिसिमा कुन चाहिँ विदेशिकाेे संयुक्त लगानी हाे?
२८ वाणिज्य बैंकको नाफा ४५ अर्ब ६६ करोड